Kuburitsa Zvemagariro Mabhizinesi
Emphatic: Kunze kweSocial Media Kwakaitwa Zvakanaka
Chishanu, May 27, 2016 Douglas Karr
Zvemagariro midhiya kubatanidzwa kunogona kuve rinotyisa basa kune kambani diki. Ndichiri kushingairira kubva kune yangu yekumaka chiratidzo, isu nokutendeseka hatina kupa yakasimba solid zano uye zviwanikwa kune yedu yemakambani midhiya yekuvapo. Izvo zviri kuchinja sezuva ranhasi, zvakadaro, sezvatinokwira tichishandisa Zvinosimbisa kuti ikure inotevera agency yedu.
Isu takaedza kumwe kushamwaridzana kwevezvenhau kuburitsa nhaurirano zvedu pamhepo, asi zvakatendeseka hazvina kumbofamba zvakanaka. Isu taiwanzo kuwana zvinotyisa zvinogadziridza, zvakashata zvemukati curation, uye zvakazara zvinyaradzo. Chipo chaEmphatic ndechekuti, bhaa hapana, akanakisa atakaona kusvika parizvino. Kunyangwe isiri yero rezvenhau rezvenhau, sevhisi iri yakanangana nezvinangwa zvako zvese. Ndiani waunoda kugadzira ruzivo na (tarisiro, vanokurudzira, vatengi), uye iwe unoda kuti vaitei?
Iyo sevhisi inoputsika mumatanho matatu anotevera akareruka:
Vaka chimiro - Goverana rumwe ruzivo rwekutanga ne Zvinosimbisa uye ivo vanogadzira yakasarudzika yezvinyorwa zvemukati zveiyo mhando.
Gamuchira zvidzoreso zvako - Vanyori-based-vanyori vanogadzira nekutumira zvinoshamisa zvemagariro midhiya zvemukati kwauri vhiki rega rega.
Ongorora uye kuronga - Wongorora zvidzoreso uyezve Zvinosimbisa ndozviisa kunetiweki dzako iwe.
Ruzivo rwakatorwa kugadzirisa yako yemukati zano yakazara. Kutanga nerondedzero yekambani yako uye akakodzera mutengi, iwe unowedzera ako ese eakaunzi maakaundi, wedzera zvakanangwa maakaundi evatengi, vanokurudzira, kana vanobatika, gadzirisa kuwanda kwekunze zvemukati kana zvemukati zvemukati zvaunoshuvira kugovana, ipa yepamusoro zviwanikwa izvo zvinogona kuwedzerwa kune musanganiswa, uye nemusoro wenyaya waunotarisa. Iwe unogona kunyange kuseta yako toni - ingave zvisina kurongwa kana zvepamutemo.
Kana iwe uri agency, iwe unogona kugadzira akawanda mutengi profiles, sarudza hombe chirongwa, uye wozo gadziridza yega yega mutengi zvemagariro zvemukati uye nekupa iyo frequency ehuwandu hwezvidzoreso.
Edza Emphatic Yemahara!
Izvi Hazvisi Kuzvigadzira uye Kanganwa Izvo
Ramba uchifunga kuti izvi zviri kungokubatsira iwe kuwana, curate, uye kubatanidza uchishandisa yako yemagariro nhoroondo account. Vashandi mubazi redu vachiri kugoverana matsva kuburikidza nemakambani edu emakambani, kugovana zvigadziriso nezvevatengi vedu uye kubudirira kwavo, uye tiri kuongorora vezvenhau kupindura chero zvikumbiro. Chishandiso senge Zvinosimbisa hazvirevi kutsiva yako yese yemagariro maseru zano; iripo kuti uwedzere icho.
Kuzivisa: Tiri kushandisa yedu pachedu kodhi yekusimudzira ye Zvinosimbisa, iyo inotora nhoroondo yedu kana iwe ukanyoresa.
Tags: zvinosimbisaoutsource yemagarirooutsource enhauoutsourced magariro enhausocial media outsourcing
Goverana neako Anofarira Ekushambadzira Mabhuku kuburikidza Anonzwika